Apple ichawana kukosha kwemabhirioni matatu nekuda kwayo mota yemagetsi | Ndinobva mac
Vaongorori vari kutsvaga nzira yekuona kuti uye sei Apple inogona kuve matatu trillion anokosha kambani. Pakaratidzika kunge ichave iri gore rino, vaongorori vazhinji vakashinga kutaura izvo hazvigoneke. Iye zvino vawana Chitsvene Grail nekutenda kuApple Mota.Pane kutaura kwekugona kuti mumakore mashoma tichaona mota yekambani ichifamba mumigwagwa uye ndiyo nguva iyo kukosha kuchazosvika. Saka zvirinani, taura vaongorori kuCitigroup neWedbush.
Vaongorori, ino nguva kubva kuCitigroup neWedbush vanofungidzira kuti kusvika kwemota yeApple Inogona kusundira Apple yemusika capitalization kune isingafungidzike $ 3 tiririyoni. Izvozvi Apple inokwana 2,05 trillion emadhora, izvo zvinogona kureva kuwedzera kweanosvika 50% pamusoro peiyo kukosha kwayo. Kuongorora uku kune hunyengeri hushoma. Muongorori weCitigroup, Jim Suva akati inogona kuwedzera kusvika gumi neshanu muzana pamari yekutengesa mushure megore ra15, apo vamwe vanofungidzira kuti Apple Car ichasvika.Zvimwe zvekukura zvinogona kubva muzvigadzirwa zveApple zviripo, kunyanya iyo iPhone.
Wedbush muongorori Daniel Ives akacherekedza iyo kubudirira kweiyo iPhone 12 seuchapupu hwekuenderera mberi kukura. Saka iyo Apple Car ichave chikamu chakanaka chekukura icho. Uyu muongorori anotipa rairo: Mitengo yemitengo yeApple inomiririra mukana wekutenga wegoridhe kune avo vanofarira. Zvikamu zveApple zvichangobva kuwira nezve 15%. Chikamu cheizvi chine chekuita nekunetseka nezvekuti, seizvo Bloomberg anozviisa, "kukwira kwezvibodzwa zvibodzwa zvakarova chikamu che tech zvakanyanya."
Saka hapana mubvunzo kuti Apple Car ndiyo ichaita kuti isvike pakukosha kwemabhirioni matatu, asi haizozviiti yoga. Ini ndinovavarira kutaura kuti mune ino ongororo zvinopera pasina kutaura kuti nekuda kweMacs ane M1 ane uye achabuda, tIyo nhamba pasina mubvunzo ichasvikawo zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Apple ichawana kukosha kwemabhirioni matatu nekuda kwemotokari yayo yemagetsi
Kurume 8 dambudziko, AirPods Max kugadzirisa uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac